Hambolena zavamaniry : hatao tanàna lavitry ny voalavo i Bemahatazana | NewsMada
Hambolena zavamaniry : hatao tanàna lavitry ny voalavo i Bemahatazana
Hametraka tanàna mikajy ny tontolo iainana ao Bemahatazana Tsiroanomandidy ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ny Tontolo iainana hamongorana ny fiparitahan’ny voalovo mpitondra ny aretina pesta. Hosantarina amin’ny volana jolay ho avy izao ny tetikasa vatsin’ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad), hoy ny talen’ny fanaraha-maso ny valanaretina, Ratsitorahina Mahery. Anisan’ny toerana ahitana trangana pesta saika isan-taona ny ao Bemahatazana ka izay no nisafidianana azy handray ny tanàna mikajy ny tontolo iainana izany. Hamboly zavamaniry tsy tian’ny voalavo ny tomponandraikitra hiadiana amin’izy ireo ary hatao maodely haparitaka amin’ny faritra rehetra be voalavo ny tanàna. Hovolena manodidina ny tanàna ireo zavamaniry ireo hampandositra ny voalavo tsy hiditra ny faritra misy ny trano fonenana.
« Fomba iray mahomby iadiana amin’ny aretina pesta ny famongorana ny voalavo isaky ny faritra sy ny distrika hatrany amin’ny kaominina indrindra ireo ahitana tranga matetika isan-taona », hoy ny minisitry ny Fahasalamana, Andriamanarivo Lalatiana.
Nandritra ny fotoana fisehoan’ny pesta farany teo, nahatratra 2 676 ny trangana aretina pesta voatily, ny 2 032 amin’ireo pesta miseho amin’ny aretin-tratra, ary 437 kosa ny pesta mitranga amin’ny atodintarina. 206 tranga tsy voasokajy. Niseho tamin’ny tanàn-dehibe teto Antananarivo sy Toamasina ny ankamaroan’ny tranga ho an’ny pesta miseho amin’ny aretin-tratra nanomboka ny 28 aogositra hatramin’ny 27 novambra.